Ọrụ nhicha Email na Ọrụ Hygiene: Ihe Mere I Ji Chọrọ Otu na Otu Esi Họrọ | Martech Zone
Email marketing bụ egwuregwu ọbara. N’ime afọ iri abụọ gara aga, naanị ihe gbanwere site na email dị mma ndị na-ezigara email na-aga n'ihu na-ata ndị ọzọ ahụhụ site n'aka ndị na-enye ọrụ email. Ezie na ndị ISP na ESP nwere ike ịhazi ihe ma ha chọọ, ha anaghị eme ya. Nsonaazụ bụ na enwere mmekọrịta mmegide n'etiti ha abụọ. Ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) gbochie ndị na-enye ọrụ Email (ESPs)… wee manye ESP igbochi ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ihe karịrị 10% nke ozi ịntanetị gị dị njọ, ihe na-erughị 44% nyefere!
Ọ dịghị mfe dịka ịpụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ebe dị ka nke anyị na ndị mmekọ na ndị mmekọ na ndị na-ere ahịa na ndị ahịa ahịa. Anyị anaghị enye ha ohere na listi anyị, mana ọtụtụ oge anyị na-anakọta adreesị email ọnụ iji gbasaa mgbasa ozi. Nke ahụ bụ nnukwu isi ọwụwa. Ndị na-enye ọrụ email anaghị eche banyere usoro optin gị ma ọ bụ ụzọ nyocha gị; nanị ihe ha na-eche bụ na ị bụ onye spam.
ESP dị ka MailChimp emejuputala ọgụgụ isi na adreesị email na sistemụ a na-akpọ Omnivore. Site na Omnivore, Mailchimp zipụrụ ịdọ aka na ntị 50,000 wee mechie akaụntụ ọjọọ dị 45,905 n'ime otu afọ naanị. Ha nwere ike ịkwalite eziokwu ahụ bụ na akụkọ ndị ahụ dị njọ… M ga-arụ ụka na ọtụtụ n'ime ha bụ naanị ụlọ ọrụ na-eziga aha ha ma ghara iji usoro kachasị mma.
Dị ka Jupiter Research si kwuo, ihe karịrị pasent 20 nke ndebanye aha email nwere ndenye, syntax, ngalaba na njehie ndị ọzọ. Ime ihe dị mfe dịka izipu na ndepụta ochie ebe otu ụzọ mbata adreesị email nwere ike ịtọ ha ụzọ. Nke ahụ abụghị obi ojoo. Notghara ịkọ bots n'ebe ahụ na-akpali adreesị ozi ịntanetị SPAM site na sistemụ kwa ụbọchị iji nwalee ma jide gị. Ihe nzuzu, n'echiche m, bụ na ekwenyere m na ọ dị mfe maka SPAMMER iji nweta email n'ime igbe mbata gị karịa ụlọ ọrụ na-ezigara ezi ozi.
Ndị na-enye ọrụ email anaghị akwụwa aka ọtọ banyere ọnụego mbata ha, kwa. Ọtụtụ mgbe, ha ga-amata a 99% nnweta mgbapụta, ma obere ebipụta na-ekwu na ọ bụ mgbe email ole na ole zigara. Ọfọn, duh first mbụ ziga weghara ghara ịdị irè adreesị email! Onu ogugu nnabata maka a Akara Ziga nke 91 ma ọ bụ karịa bụ 88%. Inwe 1% nke ndepụta ihe ọjọọ gị nwere ike dobe nnyefe gị site na ihe karịrị 10%!
Obi dị m ụtọ, enwere nyocha email ma depụta ndị na-enye ọcha n'ahịa ndị na-achịkọta ọgụgụ isi ga - enyere gị aka ihichapu ndepụta gị tupu ejide gị na ọgbaghara a. Buru n'uche na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti nkwado email site na oru nkwenye email. Nkwado email gosipụtara na e wuru adreesị ozi-e nke ọma, ebe nkwenye email na-eji usoro iji kọwaa ọ ga-eweta.
Gịnị Mere I Ji Chọọ Email Ndepụta Ọcha?
Idebe email bụ usoro dị mkpa iji nwee nnukwu mmemme nnweta email ma debe aha ọma nke onye na-ezigara gị. Lee usoro 4 ebe nhicha email dị oke mkpa:
Mbugharị - Ọ bụrụ na ị na-agagharị na onye na-eweta ọrụ ọhụrụ, nhicha email dị mkpa bụ usoro dị mkpa na gị Atụmatụ IP na-ekpo ọkụ.
Ntinye Igbe Mbata - Ozi ịntanetị gị nwere ike ịga na folda junk n'ihi na ndepụta gị nwere ọtụtụ ọnyà spam na adreesị email na ya.
Ọnụ ọgụgụ dị ala na-emeghe - Ọ bụrụ na ị naghị atụ ọnụego igbe igbe gị ma nwee ọnụego mmeghe dị ala, ozi ịntanetị gị nwere ike ịga na folda junk n'ihi ọtụtụ ọnyà spam na adreesị email.
Re-Njikọ aka - Ọ bụrụ n ’ị nwere ndepụta nke ezigabeghị na ọnwa, ị ga-achọ ịsachapụ ndepụta ahụ iji zere ọgbụgba na ụba nwere ike imetụta ọnụọgụ gị.
Etu ị ga-esi họrọ Ọrụ nhicha Email
Peeji a aghọwo ihe a ma ama, yabụ na anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-enye ụfọdụ nduzi n'ịhọrọ onye na-eweta ihe na ihe kpatara anyị ji kewaa ndepụta dị n'okpuru n'ime ọrụ email dị ọcha akwadoro na amaghi. Nkwado anyị dabere na ihe ndị a:
okwu - Ọrụ ahụ ọ nwere usoro na iwu nzuzo na-achọpụta na ha anaghị ere ma ọ bụ hapụ adreesị email gị na ndị ọzọ?
Nghọta - ọ bụ ọrụ debara aha ya n'withntanet na ozi kọntaktị maka ikike nke ngalaba ha, ebe azụmahịa na ozi kọntaktị ha? Azụmaahịa ahụ ọfịs raara onwe ya nye (ọ bụghị PO Box ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ekerịta)?
nkwado - ma ụlọ ọrụ ahụ nwere ụzọ isi kpọtụrụ ha site na email, ụdị kọntaktị, ma ọ bụ akara ekwentị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla zaghachiri arịrịọ ahụ.
Mmekọrịta - nnukwu nhazi nke adreesị email bụ otu ihe, mana ọ bụrụ na ịnwere ike iwekọta sistemụ gị niile na ebe ntinye ebe ị na-achịkọta adreesị email, nke ahụ bụ usoro ịka mma.
API - ha nwere ederede ederede nke ọma API ebe ị nwere ike iwekota usoro nke gị na ha?
nnabata - ma ụlọ ọrụ ahụ bi na mba nwere ụkpụrụ nzuzo dị ka GDPR ma ọ bụ iwu email na-akwado iwu spam.
Anyị Email List nhicha na-akwado:
Nkwenye email, nyocha na nhicha ederede ezubere maka ndị chọrọ ngwa ngwa na ntụkwasị obi na-enweghị nsogbu na nsogbu niile. Naanị usoro 3 dị mfe iji bulie ndepụta gị.
Emela nkwa 98% + ọnụego nnyefe na ndepụta email gị kwenyere.
Nhọrọ ibudata ndepụta ọhụrụ gị na akụkọ pụrụ iche.
24 / 7 ụgbọelu soro ndị dị adị na nsọtụ ọzọ iji nyere aka.
Bulite Ndepụta Email gị
Ndi na - eduzi nhicha na nhicha aha Email
Ndị a bụ nkwenye email na-eduga ma depụta ọrụ ịdị ọcha. Ihe ndị a niile gụnyere ikpo okwu ntanetị ebe achọrọghị ịkpọtụrụ ndị na-ere ahịa ma ha niile nwere okwu na iji data eme ihe, na-egosipụta nghọta, ma na-arụsi ọrụ ike iji kwado arịrịọ
Itinye n'ọrụ ndị a ndepụta ọrụ ọcha melite pasent nke ozi ịntanetị na-eme ka ya na igbe mbata, belata ihe ize ndụ ị na-egbochi site na ndị na-eweta Internetntanetị, na belata ihe ize ndụ nke ịchụ n'ọrụ site na ndị na-eweta ọrụ Email gị… ha kwesịrị itinye ego ma ọ bụrụ na ịnwee ndepụta ochie ma ọ bụ na-emekọ ihe ọnụ. Buru n'uche na ị gaghị eru 100% ziri ezi na ndepụta gị. Ndị mmadụ na-agbanwe ọrụ na ndị na-enye ọrụ mgbe mgbe, na-ahapụ adreesị email ochie ha.
Imirikiti ndị na-enye ọrụ a na-enyekwa ihe API ka i wee nwee ike iwekota ya na usoro nnweta gị.
Aeroleads - chọta ozi ịntanetị azụmahịa na nọmba ekwentị nke atụmanya. Ha nwekwara chrome extension.
Gbanwee - (ugbu a bụ akụkụ nke ndaba) ngwaọrụ ịchọrọ iji wepu ozi ịntanetị na-ezighi ezi na ọdụ data ndị ahịa gị, mkpọsa ahịa email, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ n'ịntanetị ma wepu ha maka mma. Nwere ike ịdọrọ na dobe faịlụ, kesaa faịlụ ahụ site na igwe ojii, ma nweta akụkọ zuru ezu na ndepụta gị na-enweghị ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ. Ha nwekwara API ọ bụrụ n'ịchọrọ ijikọ nkwenye email gị na ha!
Nlekọta - Nke a nnukwu email verifier-enyere gị aka bulite email nchekwa data na ọcha na gị email ndepụta na nanị otu click.
Mbupute - DeBounce ọrụ-enye gị ohere bulite na emere ebere anatara nke adreesị email ngwa ngwa na a ala ụzọ.
Onye nlele email --Nchọpụta adreesị ozi-e adịgboroja ma ọ bụ adighi mma maka gị.
Onye nlele email - (Nke dị iche na nke dị n'elu) Email Checker bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ izizi n'ime ngalaba nyocha email ahụ, na-enyere aka melite nnyefe nke nkwukọrịta email.
Ogo ọkachamara data - ozi nkwenye email na-achọpụta ozugbo ma adreesị ozi-e ọ dị ma napụta.
Adreesị ọhụrụ na-enyere ndị ụlọ ọrụ na-adabere na email aka ị nweta ego ha nwetara site n’iwu ụlọ, imelite, nkewa, na ihicha listi email ha.
Na-akpali mmasịIhe omuma ihe omuma data na-adabere na usoro iwu na-achịkwa iwu na oge nyocha algorithms nke na-eji uzo di iche iche iji mata, kwado ma chebe ya site na otutu iyi egwu email.
Teknụzụ kọmputa - Nyochaa ngwa ngwa ma kwado adreesị email na ngalaba iji hụ na ha ziri ezi tupu i tinye oge na-enweghị isi, ume, na ego, na-eme ka ozi gị nyefere site na 90%.
Igbe mbata - Kickbox na-achi achi na ị zigara ndị ọrụ ezigbo ozi ịntanetị ma nyere gị aka ikewapụ adreesị dị ala site na kọntaktị dị elu. Chebe aha gị, mụbaa ọnụego mmeghe, ma jiri Kickbox chekwaa ego.
MailerCheck - Nkwenye Email, nyocha, na nchịkọta nhicha e mere maka ndị chọrọ ngwa ngwa na nke a pụrụ ịdabere na ya na-enweghị nsogbu na iwe. Naanị usoro 3 dị mfe iji bulie ndepụta gị.
Ndebanye aha nde - Email nkwenye na-ekwe nkwa elu ziri ezi na oké ọnụ udu.
Akwụsịla na-ewepu adreesị ozi-e na-abaghị uru ma na-ebelata oke ọnụego ibiaghachi maka mgbapụta kacha mma.
Proofy - Ngwa ngwa gosipụta ma nyochaa ndepụta email gị. EU-US Nzuzo Shield Dabara.
TheChecker - 1,000 nke ndị ọkachamara si 80+ mba na-adabere na anyị nnukwu email nkwenye na email ndepụta ihicha ọrụ.
DataData - Mee ka ọnụego igbe mbata gị dịkwuo elu site na ihicha listi email gị nke adreesị ozi-e na-abaghị uru na nke aghụghọ.
Nyochaa - Mara na ị na-eziga akaụntụ nke na-agaghị ibiaghachi. Xverify nwere ike ịchọpụta adreesị email na ezigbo oge yana site na ogbe.
Webbula - Email ọcha na data nkwalite ọrụ.
Ọrụ nkwenye Email ndị ọzọ n'ịntanetị
Ndị a bụ ọrụ nkwenye email na ọrụ ọcha enweghị ihe ngosi niile nke ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ ndị dị n'elu.
Ampliz - Ampliz na-ekwenye na adreesị email nke ndị ahịa gị na oge ma na-enyere gị aka ịnọgide na-adị ọcha email na-anapụta ọnụego nzaghachi kachasị. E debanyere ngalaba a ka Enweghị nkwado ọrụ. Bounceless ga-ehichapụ listi email gị site na ịchọta ozi ịntanetị ndị a na-enyochaghị, ọnyà spam, na ngalaba nwere ike iwepụ.
Antideo - Email Validation API service to weed out Disposable / Nwa Oge adreesị email, spam na-ezigara, wdg, iji debe ndepụta gị ọcha.
Gbochie Disposable Email Adreesị - Chọta ma gbochie mkpofu, otu oge, ịtụfu, adreesị ozi-e nwa oge.
Nnukwu Email Validator - ngwa weebụ nke nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na adreesị ozi-e dị adị ma ọ bụ adịgboroja. Onye ọ bụla nke na-ezipụ ozi ịntanetị mgbe niile nwere ike irite uru site na iji sistemụ.
CaptainVerify - lelee & hichaa listi nzipu ozi gị ngwa ngwa. Dọrọ na dobe faịlụ gị na ngwaọrụ anyị ma anyị na-eme ndị ọzọ. Dị Mfe, ngwa ngwa na nchebe.
CleanTheList.com - nhicha na nkwado nke ozi ịntanetị.
Kpọtụrụ - Chọta adreesị ozi-e nke onye ọ bụla yana nọmba ekwentị
Ndabere data - Nyochaa ndepụta email gị ọsọ ọsọ. Jikọọ MailChimp ma ọ bụ Kpọtụrụ akaụntụ kọntaktị maka nyocha na-aga n'ihu na ndozi ndepụta.
Onye na -ere email - Emailmarker na-enyere gị aka inyocha ozi-e dị ala site na kọntaktị dị elu. Anyị na-ejide n'aka na ị zigara email ezigbo ndị ọrụ ma chebe aha gị, Mee mkpọsa email gị, ma chekwaa ego na Emailmarker.
Ịdị ọcha bụ ọkachamara email nkwenye ụlọ ọrụ. Ha na-ewepu boun, iyi egwu, ndị ngagharị iwe, ndị na-eme mkpesa, na nsogbu ndị ọzọ niile a na-achọpụta na ọdụ data. eHygienics na-enye ezigbo oge API nyiwe nke ndị debanyere aha na-eji kwa ụbọchị.
Azịza Email - nchebe ọrụ email dị ọcha na ọrụ nkwado nke ga-ehicha, dị ọcha, nyochaa, ma nyochaa data adreesị ozi-e gị dị.
EmailHippo - Email nkwado online ọrụ maka ọkachamara ahịa na ndị ahịa ha
EmailInspector - sachaa ma wepu adreesị email na-enweghị isi site na ndepụta ahịa gị
Email List Nyochaa - Email ndepụta kwupụtara na-echebe gị site na ntaramahụhụ site na ịnye ihe ngwọta nkwenye email kachasị oke na ahịa, na-ahụ na listi email gị enweghị ego, nwekwaa ma na-eweta ROI dị elu.
Email YoYo - Ọkachamara email nkwado ndepụta nhicha ngwọta.
Onye nkwado email - Site na Real-Time Online Validator Byteplant ị nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na adreesị ozi-e dị adị ma dị ire.
Klemail - Klemail na-enye gị ohere ịlele na ozi ịntanetị ị zitere dị adị. Chebe aha ngalaba gị ma bulie ọnụego emeghe gị.
Ndepụta - Anyị nyochara nsonaazụ nke narị otu narị nde adreesị ozi-e anyị kpochara iji chekwaa listi email ọhụrụ nke nhicha nke dị ike karịa mgbe ọ bụla. Gbalịa ListWise II n'efu ma were ọrụ ịre ahịa email gị gaa na ọkwa ọhụrụ
Onye nzipu ozi - na - ejikọ na sava ozi na - achọpụta ma igbe igbe dị ma ọ bụ na ọ bụghị
Akwụkwọ ozi - na - akwado ozi ịntanetị na ekwentị n'iji netwọkụ mmekọrịta
Otu Mastersoft - lekwasịrị anya na data Australia
Nkwenye Email ngwa ngwa - Ọrụ sitere na weebụ iji nyochaa adreesị email na nnukwu ma ọ bụ ezigbo oge site na iji REST API. Ha na-achọpụta ozi ịntanetị na-abaghị uru ma ọ bụghị na-arụ ọrụ ma nye gị akụkọ zuru ezu zuru ezu.
Onyeka Onwenu - Nkwenye Email & Ntuziaka iji nyere aka tinye igbe ntinye ma bulie aha njirimara.
Snovio - Ojuju mgbasa ozi nke ngwa ngwa - chọta, kwado, na atụmanya email na Snovio maka ọnụego ntụgharị ka mma.
Ezi ozi - Email nkwenye. Mfe, Ngwa ngwa na ọnụ ala. Hichaa listi nzipu ozi gị ma mee ka ọnụọgụ nnabata gị rue 99%. Adreesị ozi ịntanetị adighi mfe.
Verifalia - Verifalia bụ ozi nkwado email nke na - enyere gị aka bulite ma gosipụta ndepụta nke adreesị email naanị na mfe.
ngosi: Anyị anaghị ewere ọrụ ọ bụla maka ihe ịga nke ọma gị n'ịhọrọ otu n'ime ndị ọrụ a, naanị anyị chọrọ ịnye ndepụta zuru ezu na ụfọdụ ndị na-enyocha ntụkwasị obi ọzọ. Anyị na-eji njikọ njikọta isiokwu a.
Tags: Na-aga n'ihuMgbasa Ozi Arụ ỌrụọrụaeroleadsAgile-CrmAiva-ụlọ nyochaamplizautopilotAWeberBọmBọmibiaghachiagbakeeGbanweeBrontomgbasa Ozi Nyochaaisi ikeAhịandepụta dị ọchahichaa ndepụta ahụEbumnuchePịaFunnelsGndị CognitoKpọtụrụ na mgbe niilena kọntaktịConvertKitEmechiri yankwado dataNdabere dataDEAnnapụtaEnwere ike ịza emailNchọpụta enwere ike ịchọta emailntapuỊdị ọchaadreesị ozi ịntanetịadreesị ozi-e ọchaemail azịzaemail nyochaemail nhicha apiozi nnapụta emailemail hippoemail dị ọchaemail ndepụta nyochaaemail nkwadoemail nkwenyenkwenye emailemail nkwenye apiemail yoyoemailhippoespnwee ahụmịheDesdịAchọpụtaAdreesị ọhụrụGburugburuNchịkwaNa-achịkwa-Dị GoogleIsi mmaliteokpokorohubucoKpọtụrụAkpọtụrụ-Proechichentinye igbeNghọtaNtughariájáispJotFormemail njakịrịjunk email nzachaọkpọKickofflabsoziomanhicha nhichansacha ọchadepụta ịdị ọchaonye nlele ozimailchimpMailerlitemailjetNzipu oziahịaMoosendNocrmiompempe akwụkwọPowrihe akaebeproofy.ioqasQualaroonkwenye email ngwa ngwaNgwa ngwaNtuziaka-RockRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321Mgbanwe nke RFC 5322 RFC 2821RFC 6531Mgbaghara ahịaziri oziSendGridZipu oziIzipunkọtọIgha oziNjem SmartsurveyKpoospamọnyà spamadreesị email ọnyàUdochukwugbasiaronNyocha-Ebe ọ bụlaadreesị email nwa ogeonye nlereụlọ eluezi oziụdị ụdịadịghị amaNyochaa ndepụta emailnyochanyochaa emailvetikal nzaghachivetikalọhụụ 6WooboxwuowuliteikeOnyebuchiZoho CRMFordị Zoho
SEO Echiche Mygha: Should Kwesịrị Updatewelite Otu peeji nke Ejiri Elu
Nnukwu nnyocha, Doug. Ọ dị mkpa ịmara nke ahụ
izere ma merie nsogbu ịbute email na-achọ ihe zuru oke
email ịdị ọcha, mgbazi, na nkwado ọrụ dị iche na-abụghị nanị “pinging”
(ntụgharị SMTP ndenye ego) nke ọtụtụ n'ime ndị mgbere na ndepụta gị na-enye. Nyocha SMTP na-enye ozi na
ma adreesị ozi-e nwere ike ịnapụta ihe n'otu oge na izi ezi nke
nsonaazụ ndị a ka na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ ka ọtụtụ ndị ISP na-eme ihe ọ bụla ha nwere ike
iji kụda omume a. Ọzọkwa, bounces abụghị ihe otiti nke email
ndị na-ere ahịa dịka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ niile na-ada nke ọma n'okpuru ọnụ ụzọ mbata kwere
site na ISP.
Okwu kasịnụ chere
ndị na-ere ahịa email na-esite na adreesị ozi-e nwere nsogbu (dịka ọnyà spam, mmanụ a honeyụ,
ndị na-eme mkpesa spam dị ukwuu, adreesị obi ọjọọ, wdg.) Na faịlụ ha yana n'amaghị ama
nhicha dị ọcha dị ka adreesị ndị a na-anapụta bụ ndị Spamhaus na
ndị ọzọ spam-nzacha òtù na-eji ferret si spammers na ngwa ngwa na
hapụ ndị ahịa.
Staynọpụ radar nke
spam-nzacha òtù ma si otú ebuli gị ịnapụta na
ụtụ, onye kwesịrị ịrụ ọrụ na ịdị ọcha email, mgbazi, na nkwado
na-eweta nke nwere ike:
1) Gbochie nsogbu
adreesị site na ịbanye na nchekwa data gị ma kpochapụ ndị nwere
enwetalarị ebe ahụ
2) Dezie ndenye ederede na
njehie ndị ọzọ dị ọcha dịka Spamhaus tụgharịrị ọtụtụ n'ime ndị a na-emekarị
adreesị n'ime spamtraps
3) Nyochaa ihe
anapụta adreesị ozi-e ọ bụla site na ịlele megide email-akọwapụtara
ọrụ (dịka mmeghe, pịa, bounces, spam mkpesa, wdg), akụkọ ihe mere eme
Archive nke MX na SMTP ndenye ego, na ezigbo oge SMTP ndenye ego.
Ego maka ọrụ dị n'elu
na-amalite na penny kwa adreesị ozi-e wee tụlee budata na olu
na-abawanye. Ọzọkwa, zere nke ọ bụla
onye na-ahụ maka ọrụ nke ọrụ ya adịghị na ezigbo oge, akpaka akpaka
(ntụgharị 24x7x365), na full ogbe ogbe mode, nke na-agụnye ntuziaka
Ọ bụrụ na ị na-achọ iji hụ
email gị ahịa mgbalị nweta ihe kasị mma ROI na nke kacha nta nke
ụgwọ, nsogbu, na ihe egwu, iso ndị ụlọ ọrụ email dị ọcha ga-egosipụta
ịbụ obere ego kachasị mma ị nwere ike ịme.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara 25% nke
ụlọ ọrụ Fortune 100 yana ọtụtụ puku ndị ahịa, nnukwu na obere, dị
na-edebe ọdụ data email ha ọfụma, hụ http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Ọkt 8, 2014 na 2:32 AM
Ndewo Doug na billkaplan,
I nwekwara ike ihu http://www.mailboxvalidator.com maka ọrụ nhicha email.
Webbula.com bụ ụlọ ọrụ ọzọ ịlele. Ha na-enye ịdị ọcha na nkwenye
Gbakwunyere, ekele Scotty!
Daalụ maka ndụmọdụ ndị a, ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu banyere ịzụrụ ma ọ bụ ihicha nchekwa data email ha, lelee ntuziaka a: http://bit.ly/1Ka27Hh
Jul 26, 2015 na 8:19 PM
Ị nwara http://www.bulkemailchecker.com ? Agbalịrị m ọrụ ole na ole na ndepụta gị ma mgbe m nwetasịrị afọ ojuju na nsonaazụ ma ọ bụ ọnụahịa ahụ, agara m n'ihu na nyocha m wee chọta Nnukwu Email Checker. Eji m obi eziokwu kwuo na nyocha m maka ogo dị elu maka nkwado email dị n'ofe. Anọ m na-eji ha maka ọnwa 4 gara aga ma enweghị m ike inwe obi ụtọ. Lelee ha ma olile anya na ị ga-akwụsịkwa ọchụchọ gị!
Daalụ Doug, nwee izu ụka dị mma!
Jul 27, 2015 na 12:59 PM
Ọ dị na ndepụta ahụ!
Sep 23, 2015 na 3:34 PM
Anọ m ugbu a na-achọ ụlọ ọrụ iji nyochaa ndepụta m ma chọọ ịchọpụta ihe kpatara enweghị afọ ojuju na ụfọdụ n'ime ndị ọzọ na-enye gị? Adị m ọhụrụ na nke a ma ọ na-agabiga ọtụtụ weebụsaịtị iji chọpụta ihe mere ha ji dị iche. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere ike ịkekọrịta ihe kpatara na afọ ojuju gị na ndị ọzọ na ihe kpatara ị ji ahọrọ nnukwu Email Checker na saịtị ndị ọzọ niile. Nke a ga-enyere m aka na ma eleghị anya ọtụtụ ndị ọzọ na-agụ nke a. Ana m ahụ na ọnụahịa dị mma karịa na Bulk Email Checker mana m ga-achọ ịma ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ha ka mma. Daalụ n'ọdịnihu maka ịzaghachi.
Sep 24, 2015 na 4:17 PM
Ndewo Simone, enweela ihe ize ndụ dị na iji ndepụta ndị ochie ma ọ bụ ndepụta ịzụta. Ndị na-enye ọrụ email, maka ọtụtụ akụkụ, na-elelị ụlọ ọrụ ọ bụla na-ebubata adreesị email nke anaghị enyocha. Na ndị na-enye ọrụ Internetntanetị na-anabata ozi email ga-atụgharị email gị niile ma ọ bụ ọbụna gbochie onye na-eweta gị ma ọ bụrụ na ọtụtụ adreesị email ahụ bulie ma ọ bụ kọọ email dị ka SPAM. N'ihi ya, tinye n'ọrụ nyocha ngwa ọrụ dị oke egwu mgbe ị na-agbanye na adreesị email nke adreesị ozi-e dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwaọrụ na-ezighi ezi, ị nwere ike itinye onwe gị na ISP na-egbochi gị ma chụpụ gị na onye na-eweta ọrụ email ha.
Sep 1, 2015 na 11:27 PM
Daalụ maka ndepụta !! Enwere m ajụjụ. Achọrọ m ibido ọrụ nhicha email m. You nwere ike ịkwado ezigbo sọftụwia ọ bụla ịzụta. Enweela m na enweghị ihu ọma ugbu a. Achọrọ m ya akpaghị aka dị ka o kwere mee. Daalụ
Sep 2, 2015 na 10: 40 AM
Ndewo Josh, Amaghị m ihe ọ bụla, ma ikekwe otu n'ime ọrụ ndị edepụtara ebe a nwere API ma ọ bụ nye azịza White Label. Nke ahụ ga - enyere gị aka iweta azịza nke gị.
Sep 16, 2015 na 3: 26 AM
Wayzọ dị mfe iji lelee adreesị ozi-e nchekwa data, Ihe nlele email kachasị elu. Proofy.io.
Anyị nọ na beta beta ugbu a mana anyị nwere ụzọ nnwale kacha zie ezi.
Anyị chọrọ nzaghachi. Nwere ike nweta nye ụfọdụ ego iji nwalee ọrụ.
Sep 17, 2015 na 1:20 PM
Mee ka anyị mata mgbe ịnọghị na beta, anyị ga-agbakwunye gị na ndepụta nke ndị na - enye gị ọrụ!
Ọkt 13, 2015 na 2:35 PM
Naanị m gara na saịtị gị iji nwalee ọrụ gị - agbanyeghị nọmba ekwentị. O yighị ka onye ọ bụla ga-ebugo ndepụta nke ndị debanyere aha na saịtị gị na-enweghị imetụ isi na njikwa akaụntụ ma ọ bụ onye ọzọ iji gosipụta na anaghị m enye ndị debanyere aha m na ebe a na-amaghị ama.
Ọkt 13, 2015 na 4:58 PM
Ọ bụrụ na ị pịa na Kwadoro site na Neverbounce, ị ga-ahụ nọmba ekwentị ha na ogwe ntụgharị ha.
Nov 5, 2015 na 7:27 AM
Hey Douglas. O juru m anya na ị kwughị Verifalia na ndepụta gị. Ọ bụghị naanị na ọ dị ka otu n'ime ndị na-enye nkwado email kachasị na Europe mana ha na-enyekwa ihe ndị pụrụ iche anaghị m ahụ ebe ọ bụla ọzọ, gụnyere nkwado maka adreesị ozi-e ndị na-anaghị eji mkpụrụedemede Latin (anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa na ndepụta anyị site na Singapore, Japan na Saudi Arabia, dịka ọmụmaatụ), na ikike ịme ihe omimi miri emi gbasara ọtụtụ ngafe, iji kwado adreesị email na nsogbu nwa oge dịka igbe akwụkwọ ozi karịrị oke ma ọ bụ greylisting. Nke a na-eweta na-ekpughekwa a RESTful email nkwado API maka software mmepe na ọba akwụkwọ maka isi mmemme asụsụ na nyiwe… Ma ha nwere a Free atụmatụ nke na-abịa na ruo 125 free email validations kwa ụbọchị.
Nov 5, 2015 na 7:07 PM
Daalụ - anyị agbakwunyela Verifalia na ndepụta ahụ!
Nov 25, 2015 na 4:56 PM
Ekwenyere m na gị
na ekele maka post a 🙂
Ejiri m ụfọdụ ndụmọdụ dị na blọgụ a iji bulie ọrụ nkwenye email. Emechara m na-aga na emaillistverify.com, ma mgbe m nwere obi ụtọ na ha na ndepụta mbụ m, ndepụta ọ bụla m gbalịrị ịgba ọsọ na ọrụ ha bụ nsogbu, nke kachasị na enweghị m ike ibudata ndepụta nke ihe dị ọcha ozi ịntanetị mgbe emechara. Kedu ihe bụ iji ojiji ọrụ ha ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịchọpụta adreesị ozi-e ndị ọ dị ọfụma? Wezụga nke ahụ, nkwado ha anaghị anabata ozi ọma nke ukwuu, ha anaghị echegbu onwe ha maka ijide ndị ahịa.
Anyị enweela nnukwu ihu ọma na Neverbounce… nke mere na anyị esoro ha.
achọrọ m ọrụ ma ọ bụ ngwanrọ n'efu free. odi mgbe odi?
Ahụbeghị m nke ọ bụla.
Akwa post! Naanị m na-eche ma m ga - enwe ike ijikọ ọrụ dịka nke ahụ na GetResponse?
Andrea, ekwere m ya. Echere m na ụzọ ị ga-esi mee ya bụ ịnweta ụdị gị na API nke ụlọ ọrụ nkwenye ahụ. Ozugbo emeghachitere email ahụ ka ekwenye na ya, ị nwere ike ịkwanye ya na GetResponse.
Jul 9, 2016 na 1: 21 AM
Ana m eji ya ugbu a https://www.emailverifierapi.com/ iji nyochaa adreesị email na ngwa ahịa ahịa email nke ụlọ ọrụ 500 bara uru. Enweghị m mkpesa dị ka ogo ọrụ zuru oke, agbanyeghị anyị na-achọ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala nke na-enye otu ogo ahụ. Nwere ike ịtụ aro ụdị ngwa ọrụ ọzọ a nwere ike iji rụọ ọrụ? “Enterprise ọkwa” ịbụ isiokwu. Daalụ maka enyemaka gị!
Jul 12, 2016 na 5:58 PM
Enwere m olileanya, ị na-eme nke ọma, naanị iji melite gị, Anyị na-agba ọsọ nkwenye Email anyị.
ebe ị na-achọghị mkpa imefu nnukwu ego gị. M ga-enwe obi ụtọ karịa ịza gị gbasara usoro anyị Otu anyị si arụ ọrụ n'ezie.
Anyị na-enweta ndepụta ahụ n'aka ndị ahịa chọrọ ịchọpụta ozi ịntanetị, mgbe ahụ anyị kpọrọ onye nnabata ma ọ bụ General Manager nke ụlọ ọrụ ahụ anyị nakọtara ozi ịntanetị ha ziri ezi,
site na ime nke a mgbe ụbọchị 15 gasịrị, anyị nyochaa ya na usoro nkwenye email anyị anyị na-eme Eblast.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mgbagwoju anya ma ọ bụ ajụjụ banyere nke a gbasara ụgwọ.
Enwere ike izipu anyị ozi, anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo enwere ike
Ọkt 25, 2016 na 8:26 AM
Daalụ maka isiokwu ahụ! M na-eji proofy.io ma nwee obi ụtọ na ya. Ọnụahịa maara ihe ọ dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ ma ruo ogo na ọsọ.
Ọkt 25, 2016 na 8:47 AM
daalụ maka Proofy.io
Dee 2, 2016 na 4: 37 AM
Proofy.io bụ ụlọ ọrụ ojoro. Ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ. M ugwo maka 10000 ndenye ego, uploaded m ndepụta nke 4000 ozi ịntanetị na ọ meela "Nhazi" n'ihi na nke ikpeazụ 2 ụbọchị .. The Live Enyemaka na saịtị na niile ozi banyere saịtị m nwere ike ịhụ online, site Google bụ mgbe niile site na nwoke akpọ Roman (onye nwekwara ike ịbụ onye nwe saịtị ahụ) yana enyi ya Anna. Achọtala m nyocha ndị ọzọ a na-ekwenye ekwenye na ekwesịghị m inye ha ego ka ha na-agba nkịtị ugbu a. Ha kwuru ihe gbasara "programmer na-arụ ọrụ na ihe nkesa ugbu a" mana kemgbe ahụ - enweghị nkwukọrịta na enweghị ego azụ. Ejikwala proofy.io !!!
Dec 20, 2016 na 10:00 PM
Daalụ maka ndụmọdụ! Atụmatụ dị egwu.
Daalụ maka post!
Anyị na-achọ ụlọ ọrụ nwere ike inye akwụkwọ akwadoro akwụkwọ gbasara adreesị ozi-e gosipụtara na ọ dị ezigbo mkpa.
You ma ụlọ ọrụ ọ bụla dị otú ahụ?
Ejighi m n'aka na onye ọ bụla nwere ike inye nkwenye gọọmentị ebe ọ bụ na ndị mmadụ kwụsịrị iji ozi ịntanetị ma gbanwee adreesị email kwa ụbọchị. Nke kachasị mma bụ ikpo okwu na-anwale ijide mgbanwe adreesị ozi-e na ndepụta gị nwere ike ịpuchasị na nke ahụ.
Jenụwarị 11, 2017 na 11:07 PM
“Ihe asusu, n’uche m, bụ na ekwenyere m na ọ dịịrị SPAMMER mfe ịnweta ozi igbe na igbe ozi gị karịa ụlọ ọrụ na-ezigara ụlọ ọrụ na-ezi ozi ziri ezi.”
Probably nwere ike ịbụ ihe ziri ezi na nke a, mana nke ahụ bụ n'ihi na azụmaahịa niile anaghị eji ahịa email eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ oge zuru ezu maka ndepụta ha ka ha nwekwuo ike ịba uru yana ka ha mụta omume kacha mma. Ha (onye obula) kwesiri izipu ozi karia.
Ma banyere ndepụta nke ngwaọrụ… dị egwu!
Jenụwarị 11, 2017 na 11:09 PM
Anyị na-aga ịgbaso ọkwa a na mkparịta ụka Podcast dị ukwuu na CEO nke Neverbounce, Oscar. Nọrọ na-ekiri!
Echere m na enweghi ụzọ iji nyochaa email gị ozugbo emepụtara gị. Yabụ, echere m na ị ga-eme nke a mgbe ị mepụtara acc gị na nzọụkwụ mbụ.
Edemede Awsome. Enwere m ike ịma ma ọ bụrụ na ị gbabaala Webinar na onye isi nke Neverbounce, Oscar?
M na-achọ ihe ọmụma banyere verifying adreesị email na ezigbo oge dị ka a ọhụrụ ahịa na-abịa ụlọ ọrụ m. Enwere sọftụwia / teknụzụ ahụ ka m tinye tinye na ngwanrọ anyị ugbu a? Ka ọ ga-adị mkpa ka anyị gbanwee ngwanrọ niile anyị nwere ugbu a? Ọtụtụ ihe anyị nwere nsogbu nke ndị otu anyị na-ede na adreesị ozi-e ndị ahịa na-ezighi ezi ma ọ bụ ndị ahịa na-eme nke ọma. Ọ ga-amasị m ịkwụsị ya na nzụta kama iji kpochapụ ndepụta ahụ mgbe ahụ anyị na-ejide adreesị ozi-e na-adịghị mma kama iru ndị ahịa anyị.
Aug 29, 2017 na 12:24 PM
ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na ezigbo oge nkwenye email, gwa ụmụ okorobịa na emailchecker.com, enwere m ahụmịhe mbụ m nwere n'iji ezigbo oge ha eme ihe yana oke ma zie ezi!
Ndewo Douglas, Nchikota di nma n’ebe ahu. Ọ dị m ka ị tufuru nnukwu onye ọkpụkpọ - http://www.emailverifierapp.com Biko lelee ya. Daalụ
Aug 29, 2017 na 12:22 PM
Nnukwu isiokwu Doug dị ezigbo mkpa na ụfọdụ ezigbo nkọwa, Anyị na-agba ọsọ ụlọ ọrụ gen wee nwee ọtụtụ mpịakọta peeji nke weebụ maka ndị ahịa ma na-anakọta puku puku ozi ịntanetị otu ụbọchị! anyị ejirila ụlọ ọrụ ole na ole mana anyị laghachi na ụlọ ọrụ mbụ anyị anyị nwalere na (ụlọ ọrụ a na-akpọ Email Checker) dị ka achọtara sọftụwia ha kacha bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Anyị na-eji API ha na ibe anyị na nnukwu ngwa ọrụ anyị ma bụrụ ndị ama ama na ndị ahịa anyị, ha na-enye nkwenye dị ukwuu yana nke anyị na-eji oge eji oge eme ihe mana anyị na-eji API kwa ụbọchị na nsonaazụ dị ukwuu. Agbanyeghị naanị ịchọrọ ịkọ ahụmịhe m dịka amaara m na asọmpi dị ukwuu dị ebe ahụ, nye ụmụ okorobịa ahụ na emailchecker na-eti mkpu na weebụsaịtị ha bụ http://www.emailchecker.com ma gwa ha John Morgan zitere gị 🙂
Ọkt 15, 2017 na 4:14 PM
Obi dị m ụtọ na ị kwuru ọdịiche dị n'etiti nkwado na nkwenye. Anyị enwere ike ịgbakwunye emailchecker.com na ndepụta ahụ?
Ọkt 27, 2017 na 9:39 AM
Ọkt 28, 2018 na 12:53 PM
Nke a bụ ngwá ọrụ ọzọ bara uru m chọrọ ịtụ aro: https://debounce.io
Uld nwere ike itinye nke a na listi gị?
Dee 10, 2018 na 7: 59 AM
Anyị agbakwunyela DeBounce, daalụ!
Feb 3, 2019 na 12:00 PM
Wanna na-atụ aro otu ngwa maka nkwenye email - https://mailcheck.co
Ha na-ebufe kari na profaịlụ mmekọrịta nke ejikọtara na mail, na-erughị na ndenye ego smtp. Ọ na-enye ohere ịnweta ozi ndị ọzọ ma chọpụta na onye nwe email nọ na gravatar, gmail, wdg.
Feb 5, 2019 na 6:56 PM
Daalụ, agbakwunyela m ya!
Enwere m ike ịgbakwunye otu ngwa ọrụ dị ukwuu na ndepụta a?
Ezigbo (https://truemail.io/) bu ezigbo nkwenye email.
Ọ bụ nnọọ ezi na mfe na-eji. Ọ ga-ehichapụ ndepụta gị ngwa ngwa site na adreesị ozi-e ndị na-adịghị mma na nke dị ize ndụ.
Site n'ụzọ, ọ nwere nkwenye email n'efu 1,000 kwa ọnwa.
Aug 6, 2019 na 1:07 PM
Daalụ Alona! M tinye ha na ndị ọzọ na ndepụta dị ka ha na-ezo obodo ha si na-enwe ha whois data setịpụrụ onwe.
Mee 24, 2020 na 5: 50 PM
I nwekwara ike nyochaa ozi ịntanetị site na ọrụ nkwenye n'efu a: https://www.emailverified.org
Nov 14, 2020 na 5:06 AM
Ndewo Doug, ọ dị mma n'ụzọ ị si mee ka isiokwu ahụ dị ọhụrụ na afọ ole na ole gara aga na ndị ọrụ ọhụrụ, ana m aja mbọ ahụ. Ọ ga-amasị m ịtụ aro Antideo ka agbakwunye na ndepụta ahụ, ọ bụ otu n'ime ọrụ dị ọnụ ala karịa ebe ahụ. Ego a na - akwụghị ụgwọ nke na - enye ego karịrị puku abụọ maka ndenye ego kwa ọnwa karịrị nke zuru ezu maka obere azụmaahịa, yabụ ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga - ele ọrụ ahụ anya (www.antideo.com) ma tinye anyị na ndepụta gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ dabara.
Nov 18, 2020 na 4:41 PM
Daalụ, agbakwunyela m ya na ndepụta ahụ. Otu akụkụ ederede, ọ dị ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị ọ dị ala.